ဆံပင်ရှည်ကိုဘယ်လိုဖြတ်ရမလဲ။ အကောင်းဆုံးနည်းလမ်း ၈ ခု - ဂျပန်ကတ်ကြေး
ဆံပင်ရှည်ကိုဘယ်လိုဖြတ်ရမလဲ။ အကောင်းဆုံးနည်းလမ်း ၈ ခု
ဂျိမ်းအဒမ်အားဖြင့်ဖြစ်သည် နိုဝင်ဘာလ 11, 2020 ဖတ်ပြီးသားမိ 15
ဆံပင်ညှပ်ခြင်းထက်ဆံပင်ညှပ်ခြင်းကသင့်ကိုငွေသက်သာစေနိုင်သည်။ သငျသညျသည်းခံခြင်းနှင့်သင့်လျော်သော tools များနှင့်အတူလျောက်ပတ်သောဆံပင်ညှပ်ရနိုင်သည်။
ဤဆောင်းပါး၌ဖော်ပြထားသောနည်းလမ်း ၈ ခုရှိသည်။ သင်သည်သင်၏ဆံပင်နှင့်သင်ရွေးချယ်မှုအရတစ်ခုကိုရွေးချယ်နိုင်သည်။
သင်ဆံပင်ညှပ်ကတ်ကြေးတစ်စုံဝယ်သင့်သည်။ သူတို့ကိုသင်အလှပြင်ပစ္စည်းအရောင်းဆိုင်သို့မဟုတ်အခြားသူများတွင်ရှာနိုင်သည်။ သူတို့ရဲ့စျေးနှုန်းကဒေါ်လာ ၅၀ ကနေ ၁၅၀ အထိဖြစ်နိုင်တယ်။ ၅.၅ လက်မရှည်သောကတ်ကြေးရရှိရန်ကြိုးစားပါ။ ဓါးသွားတိုနေလျှင်ဖြတ်ခြင်းကိုထိန်းချုပ်ရန်လွယ်ကူသည်။
အမြန်သိကောင်းစရာဖြေ - သာမန်အမှားတစ်ခုကမှိုင်းတဲ့ကိရိယာတွေကိုအသုံးပြုတာဖြစ်တယ်။ သငျသညျမှိုင်းကတ်ကြေးများသည်အပိုင်းအစများဖြစ်ပေါ်စေသောကြောင့်ကတ်ကြေးများကိုထက်မြက်စေရန်သေချာစေသင့်သည်။ နောက်ပြproblemနာတစ်ခုကဆံပင်ကိုအညီအမျှဖြတ်တောက်ခြင်းမဟုတ်ပါ။ အလွှာများရှိပါကဆံပင်သည်သင့် ဦး ခေါင်း၌မှန်ကန်သောနည်းလမ်းအတိုင်းထားသင့်သည်။
•ဆံပင်ညှပ်ခြင်းပုံစံကိုရွေးချယ်ရန်အတွက်နာမည်ကြီးဓာတ်ပုံများကိုလှန်လှောကြည့်ပါ။ ဆံပင်ပုံစံမဂ္ဂဇင်းများကိုကြည့်ပါ၊ မှန်၌ဆံပင်နှင့်ကစားပါ၊ သင့်ဆံပင်သည်မတူကွဲပြားသောပုံစံအတိုင်းဖြစ်သည်။ သင်၏ဓာတ်ပုံများကိုပုံနှိပ်။ သင်၏မျက်နှာပေါ်တွင်ကွဲပြားသောဆံပင်ပုံစံများပြုလုပ်ပါ။
•အလျင်စလိုဆုံးဖြတ်ချက်မချပါနှင့်။ သင်ဆုံးဖြတ်ချက်မချမီအချိန်အနည်းငယ်ယူပါ။ ဥပမာအားဖြင့်၊ သင်သည်သင်၏ဆံပင်ကိုတိုစေလိုလျှင်ဤသို့ပြုခြင်းမပြုမီရက်အနည်းငယ်ကြာအောင်ယူပါ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မင်းရဲ့ဆံပင်တွေတိုတာနဲ့မင်းတို့ရဲ့ရှည်တဲ့ဆံပင်ကိုဖျက်ပစ်လို့ရတယ်။
• အကယ်၍ သင်သည်သင်၏ဆံပင်ပုံစံကိုသိသိသာသာပြောင်းလဲမှုပြုပါကအရာအားလုံးမှန်ကန်သွားစေရန်အတွက်ကျွမ်းကျင်သူနှင့်တိုင်ပင်သင့်သည်။
ဖြတ်ခြင်းမပြုမီသင်ခြောက်သွေ့သောသို့မဟုတ်စိုစွတ်သောဆံပင်ညှပ်ချင်လျှင်စဉ်းစားပါ။ စိုစွတ်သောဆံပင်များကိုဖြတ်တောက်ခြင်းသည်စီမံခန့်ခွဲရန်လွယ်ကူပြီးကျွမ်းကျင်သူများစွာကလည်းအကြံပြုသည်။ ကျွမ်းကျင်သူများကဆံပင်ကိုခြောက်သွေ့အောင်ဖြတ်တောက်ရန်အကြံပေးလိုသည်။ သင်သည်ဖြတ်တောက်ခြင်းအကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုချက်ချင်းတွေ့မြင်နိုင်သည်။
အကယ်၍ သင်၏စိုစွတ်သောဆံပင်ကိုဖြတ်တောက်ပါကသင်လိုချင်သည်ထက်အနည်းဆုံးအချို့သောလက်မကိုလျှော့ချပါ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်သင်၏ဆံပင်များသည်ညှိုးနွမ်းသွားပြီးခြောက်သွေ့သွားသည်နှင့်တပြိုင်နက်တိုသွားလိမ့်မည်။ ခြောက်သွေ့သောဆံပင်ညှပ်ခြင်းကမညီမညာဖြစ်နေသောဆံပင်ကိုထုတ်လုပ်နိုင်သည်။
ထိုအခါစိုစွတ်သောဆံပင်ဖြောင့်ဖြီး။ အကယ်၍ သင်ခြောက်သွေ့နေစဉ်ဆံပင်ကိုညှပ်ပါ၊ ထို့နောက်ဆေးကြောပြီးလျှင်အခြောက်လှန်းပါ၊ သင်ပုံမှန်ဆံပင်ဖြူသောဆံပင်များကိုခွဲပေးပါ။ သငျသညျပုံမှန်ဆံပင်ဖြောင့်လျှင်ဆံပင်ဖြတ်တောက်မီဖြောင့်။
နည်းလမ်း ၁ - အနိမ့်အုန်းလက်ဆံပင်ညှပ်ခြင်း
ပထမ ဦး စွာသင်၏ဆံပင်ကိုစိုစေ။ သင်မကြာသေးမီကဆံပင်ကိုဆေးကြောပါကထပ်မံမဆေးပါနှင့်။ သငျသညျလတ်ဆတ်သောရေ spritzing အားဖြင့်ဆံပင်စိုစွတ်နိုင်သည်။ ၎င်းသည်သင့်အားနောက်ကျောမှအနည်းငယ်ဝိုင်း ၀ န်းနိုင်သည့်ဆံပင်ဖြောင့်စေပါလိမ့်မည်။
2. အပိုင်းအလယ်ပိုင်း Down ဆံပင်
ဆံပင်ကိုအလယ်၌ ပြန်၍ သင်၏သရဖူ၏ထိပ်သို့ခွဲလိုက်ပါ။ ဤအချက်၏နောက်ကွယ်မှဖြောင့်သောဆံပင်ကိုပြန်ဖြုတ်ပါ။ သင်ဆံပင်ခွဲတဲ့အခါအတိအကျ Be ။ အစိတ်အပိုင်း၏တစ်ဖက်တစ်ချက်ပေါ်ရှိဆံပင်များဖြီးရန်အတွက်ကောင်းသောဖြီးကိုသုံးပါ။
၃။ သင်၏ဆံပင်ကို Ponytail အနိမ့်၌ပြန်ထားပါ
သင်၏လည်ပင်း၏နှာခေါင်းတွင်ဆံပင်ကိုအမြစ်တွယ်နေသောနောက်ဆံဆွဲချပါ။ ထို့နောက်အရည်အသွေးကောင်းသောဖြီးကိုအသုံးပြုပါ။ မင်းတို့ဆံပင်တွေကမင်းခေါင်းကိုဆုပ်ကိုင်ထားတာကိုသေချာအောင်လုပ်ပြီး၊
ဆံပင်ကိုတစ်ချိန်တည်းဖြုတ်ပစ်လိုက်ခြင်းဖြင့်သူတို့ကို ponytail ထဲမထည့်ခင်သူတို့မှာပြုတ်တွေမရှိဘူးဆိုတာသေချာအောင်လုပ်ပါ။
ထို့အပြင် ponytail သည်သင်၏ ဦး ခေါင်း၏နောက်ကျောတွင်ရှိပြီး၎င်းသည်သင်၏လည်ပင်း၏နှာခေါင်းတွင်အလွန်နိမ့်သည်ကိုသေချာအောင်လုပ်ပါ။
4. နောက်ထပ် Ponytail ကိုင်ဆောင်သူထားပါ
ဆံပင်တွင်အခြား ponytail ကိုင်ထားသူကိုထားပါ။ ပြီးတော့ဒီ ponytail ဟာသင်ဆံပင်ကိုဖြတ်တောက်နိုင်မယ့်နေရာမှာရှိနေရပါမယ်။ ဒါဟာအခြားတစ်ခုအောက်တွင်အချို့သောလက်မရှိနိုင်ပါသည်။
5. Pinch နှင့် Ponytail အထက်သို့ဆွဲပါ
သင်၏ ponytail ကိုမျက်နှာကြက်သို့ညင်သာစွာဆွဲထုတ်ပါ။ သင်၏လည်ပင်း၏ nape မှဆံပင်များကိုမဖြေဘဲမလုပ်ပါနှင့်။ ဤအချက်မှာဆံပင်ကိုမည်သည့်နေရာတွင်ဖြတ်ရမည်ကိုသင်ဆုံးဖြတ်သင့်သည်။
ဒုတိယကိုင်ဆောင်သူအောက်မှဆံပင်များများကိုဖယ်ထုတ်ပစ်ပါ။ ထပ်ဆင့်။ သေးငယ်သောအပိုင်းအစများဖြင့်ပြုလုပ်ပါ။ ဆံပင်၏အတုံးလုံးကိုတစ်ချက်တည်းမဖြတ်ပါနှင့်။ သင်၏ ponytail ၏အဆုံးသည်တတ်နိုင်သမျှသေချာအောင်လုပ်သင့်သည်။
၇။ သင်ပိုမိုဖြတ်တောက်သင့်မသင့်ကိုဆန်းစစ်။ ဆုံးဖြတ်ပါ
Ponytail Holders များကိုဖယ်ရှားပြီးလျှင်ဆံပင်များကိုလှုပ်ပါ။ အကဲဖြတ်ပြီးတော့အရောင်တင်။ ဆံပင်၏ညီမျှမှုရှိမရှိစစ်ဆေးရန်ရှေ့သို့တွန်းပြီးရှေ့သို့ဆွဲပါ။ ထို့နောက်သင်ကြိုက်သည့်အတိုင်းသင့်ဆံပင်ညှပ်ကိုချိန်ညှိပါ။ သင်၏ဆံပင်ပုံစံသည်သင်လိုချင်သည့်အတိုင်းပင်မဟုတ်ပါက၎င်းကို ponytail ထဲတွင်ထည့်။ ဆံပင်များကိုထပ်တလဲလဲထားနိုင်သည်။ ၎င်းကိုတိုတိုဖြတ်တောက်ရန်မကြိုးစားပါနှင့်။ ၎င်းတို့ကိုနောက်ပြန်လှည့် ponytail ထဲတွင်ပြန်ထားပါ၊ ဆံပင်ကိုတစ်လက်၌ကိုင်ထားပါ၊ အခြားသူများနှင့်မတူသောသွေဖည်များကိုညှပ်ပါ။
နည်းလမ်း ၂။ Twist Hair Cutting Method
ဆံပင်ဘယ်လောက်လိုအပ်သလဲ။ ဆံပင်တွေကိုခေါင်းပေါ်မှာမြဲမြံစွာကိုင်ထားပါ၊ ထို့နောက်သူတို့ကိုဖြတ်ပါ။
သင်ကတိုတောင်းသောအလွှာကိုလဲရန်ရှေ့ဆံပင်ကနေဆံပင်တစ်ဖဲ့ကိုဆွတ်ခြင်းအားဖြင့်အတိုအလွှာလဲဘယ်မှာလဲလဲဆုံးဖြတ်နိုင်ပါတယ်။ သင်လှည့်ပါလိမ့်မယ်ဘယ်မှာပြန်ကဆွဲထုတ်။ ၎င်းသည်မည်သည့်နေရာတွင်ဖြတ်တောက်ရမည်ကိုလမ်းညွှန်အဖြစ်ဆောင်ရွက်လိမ့်မည်။
သင်၏ဆံပင်ကိုချန်ထားပါ၊ ၎င်းမှတစ်ဆင့်ဖြီးပါ၊ ထို့နောက်သင်၏ဆံပင်ကိုထပ်မံဆွဲတင်ပါ၊ ဆံပင်ကိုဆန့်ကျင်ဖက်သို့လှည့်ပါ။
မည်သည့် straggly ဆံပင်ဖြတ်လိုက်ပါ။ သင်၏လိမ်နေသောဆံပင်ကိုနောက်တစ်ခေါင်းခေါင်းအုံးတွင်ကိုင်ထားပြီးဆံပင်မဖြုန်းဘဲဆံပင်ကိုဖြတ်ပြီးရွှေ့ပါ။
သွားကြကုန်အံ့။ သင်၏ဆံပင်ကိုသွားခွင့်ပြုပြီးသင်လိုချင်သောပုံစံဖြင့်ပုံစံထုတ်ပါ။ ယခုတိုတောင်းသောလုံလောက်မှုရှိမရှိကိုသင်ဆုံးဖြတ်နိုင်သည်၊ သို့မဟုတ်သင်ဆက်လက်ဖြတ်တောက်လိုလျှင်၊ အဆင့် ၁ မှ စတင်၍ ပြန်လည်သုံးသပ်ပါ။
နည်းလမ်း ၃။ Pixie ဆံပင်ညှပ်များအတွက်လိမ်နည်း
ဆံပင်၏ရှေ့မှောက်၌မြိတ်ကိုချွတ်အပိုင်း။ အကယ်၍ သင်သည်ရှည်လျားသောမြိတ်နှင့်ဘန်းလိုလျှင်၊ ဆံပင်အရှည်ကိုမစတင်မီသင်၏ဆံပင်ထိပ်မှအပိုင်းတစ်ခုကိုဖြုတ်ပါ။ သင်ဘန်ကိုမလိုအပ်လျှင်၊ နောက်တစ်ဆင့်သို့သွားပါ။
Bangs တွေကိုဘယ်လိုဖြတ်မယ်ဆိုတာသင့် pixie cut style ပေါ်မူတည်သည်။ သင်၏ pixie ဖြတ်ခြင်းနှင့်ရောနှောနေသော wispy bangs များအတွက်သင့်မျက်နှာကိုထောင့်ဖြတ်ဖြတ်ပြီး ၇၅ ဒီဂရီထောင့်ဖြင့်သင့်အနားသို့ခုတ်ပါ။
အတုံးအပိုများအတွက်၊ နားမှနားသို့တိုက်ရိုက် ဖြတ်၍ သင်၏ဆံပင်ကိုသေးငယ်သောအပိုင်းများတွင်ရွေ့ပါ။
တစ်ဖြီးယူပါသို့မဟုတ်သင်၏ဆံပင်မှတဆင့်ကအလုပ်လုပ်။ ထိပ်ဆုံးသို့ချောင်းမြောင်း။ ဖြည့်ပြီးအနည်းငယ်လှည့်ပါ၊ ထို့ကြောင့်ကိုင်ထားရန်လွယ်ကူသည်။
သင်၏ဆံပင်ကိုညှပ်ပါ။ သင်၏သီးနှံများဘယ်လောက်ကြာကြာရန်လိုအပ်သည်ကိုအောက်ဆုံးနားတွင်သင့်လက်ချောင်းများကိုချထားပါ။ သငျသညျကျေနပ်မှုပြီးနောက်, သင့်ရဲ့တိုတောင်းသောဆံပင်သစ်ကိုဖြီး။
ပါးလွှာသောဆံပင်ပုံစံကိုယူပါ၊ သို့မဟုတ်ဒေါင်လိုက်တက်။ ဖြတ်လိုက်ပါ။ သင်ထိုသို့ပြုလုပ်သကဲ့သို့မျဉ်းဖြောင့်ကိုဖြတ်ရန်လိုသည်။ သင်လိုချင်သောအရှည်ရရှိရန်သင်လိုချင်သလောက်ယူပါ။
ကျန်တဲ့ဆံပင်ကိုဆက်ဖြတ်ပါ။ အရင်ဖြတ်ထားသောအပိုင်းကိုလမ်းညွှန်အဖြစ်အသုံးချနိုင်သည်၊ သင်၏ပထမဆံပင်နှင့်အပြိုင်သင့်ဆံပင်အချို့ကိုဆွဲယူ။ သင့်လျော်စွာဖြတ်နိုင်သည်။ အပြိုင်အပိုင်းများကို ဆက်၍၊ နောက်ဆုံးဖြတ်အပိုင်း၏အနည်းငယ်ကိုလမ်းညွှန်အဖြစ်အသုံးပြုပါ။ သင်ပြီးတဲ့အခါအနားကိုတန်းပြီးမျှတအောင်လုပ်ပါ။
နည်းလမ်း ၄ - မြင့်မားသော Ponytail ဆံပင်ပုံစံ
စင်ကြယ်။ စိုစွတ်သောဆံပင်ဖြင့်စတင်ပါ။ ဤဆံပင်သည်သင်၏ဆံပင်ထိပ်တွင်လေးလံသောအလွှာများကိုပေးလိမ့်မည်။ သင်၏ဆံပင်ကိုဆေးကြောပြီးလျှင်နောက်တဖန်လျှော်။ မလျှော်စေဘဲ၊ ရေဆေးပုလင်းနှင့်ရေချိုကို သုံး၍ သူတို့ကိုစိုစွတ်နိုင်သည်။
သင်၏ခေါင်းသည်အောက်ဘက်သို့လှည့်ကာသင်၏ခါးကိုကွေးပါ။ သင်၏ဆံပင်ကိုညှပ်ရန်ဇောက်ထိုးလှည့်စရာမလိုပါကသင်သည်မတ်တပ်ရပ်နေသော်လည်းမြင့်မားသော ponytail နည်းကိုသုံးနိုင်သည်။ ကျန်ရှိသောခြေလှမ်းများကိုလိုက်လျှောက်ရန်သင်၏မြင့်သော ponytail ကိုသင်၏လက်တစ်ဖက်တွင်အထက်သို့ဆွဲထားပါ။
3. ဖြတ်ပြီးဖြီးနှင့် Ponytail ဖန်တီးပါ
သင်၏ဆံပင်ကိုသင်၏ခေါင်းထိပ်နားတွင်ရှိသော ponytail ထဲသို့ဖြီး။ ဖြန်းပါ။ မင်းခါးမှာကွေးနေတုန်းမင်းခေါင်းကအောက်ဘက်ကိုလှည့်နေတုန်းမှာလုပ်ပါ။
သင်၏ဆံပင်ကိုတတ်နိုင်သမျှအမြန်ဆုံးဖြစ်စေရန်အလယ်ဗဟို၌ရှိသည့်မြင်းနီ၏ ဦး တည်ချက်နှင့်သင်၏ ဦး ခေါင်းထိပ်တွင်ဖြစ်သည်။ သင် ponytail ၏တည်နေရာကိုဆုံးဖြတ်ရန်မှန်ကိုသုံးပါ။
4. Ponytail ပြုလုပ်ရန် Elastic Bands သို့မဟုတ် Hair Ties ကိုသုံးပါ
သင့်ရဲ့ ponytail ကို elastic band နဲ့တင်းတင်းကျပ်ကျပ်လုံခြုံစွာထားပါ။ သင်၏ပထမ ဦး ဆုံးတီးဝိုင်းကိုသင်၏ ဦး ရေပြားနှင့်ကပ်ထားပါ၊ သို့မှသာသင်၏ဆံပင်များမလျှောနိုင်ပါ။
ဒုတိယ elastic band ကို ponytail အောက်မှာချထားပါ။ ဤဒုတိယ elastic တီးဝိုင်းသည်သင်လုပ်ရန်လိုအပ်သည့်နေရာတွင်ထိုင်ပါလိမ့်မည်။
သင့်ရဲ့ဆံပင်ကိုဒုတိယ elastic band အထက်မှာထားပါ။ သင်၏ဆံပင်၏အောက်ခြေကိုသင်၏လက်တစ်ဖက်၌ကိုင်ထားပါ၊ ဒုတိယလက်၌ကတ်ကြေးများကိုကိုင်။ ဆံပင်များဖြတ်တောက်ပါ။
ဆံပင်တစ်လျှောက်လုံးဆံပင်ကိုဖြတ်ဖြတ်ရန်မကြိုးစားပါနှင့်။ သငျသညျ ponytail မှတဆင့်လမ်းအပေါင်းတို့သည်မဟုတ်လျှင်သေးငယ်တဲ့ snips လုပ်ပါ။
သင်၏ဆံပင်ကို ponytail မှလွှတ်လိုက်ပါ။ ။ လိminaအဆိုပါ elastic တီးဝိုင်းအဖြစ်သင်၏ဆံပင်လှုပ်။ ၎င်းကိုဖြုတ်ပြီးသင့်လက်ချောင်းများကို ဖြတ်၍ ပြေးပါ။
အများဆုံးပြီးသွားထိလုပ်ပါ။ အကယ်၍ ၎င်းသည်ပြောင်ပြောင်တင်းတင်းနှင့်မညီမညာဖြစ်နေပါကသင်၏ဆံပင်ကိုတစ်ဖန်လှန်လိုက်ပါ။ နောက်တစ်ခါ ထပ်မံ၍ သင်၏ခေါင်းထိပ်ထိပ်ရှိ ponytail ထဲသို့ထပ်ထည့်ပါ။ ထို့နောက် ponytail ကိုလက်တစ်ဖက်ဖြင့်ကိုင်ထားပြီးလျှင်အဆုံးမှဆွဲထုတ်သွားသောဆံပင်မှန်သမျှကိုချုံ့ပါ။ ponytail ။
အများအပြားသွေဆံပင်ရှိသင့်ပါဘူး။ အကယ်၍ သင်သည်များစွာသောသူတို့ကိုမြင်လျှင်၊ ဆံပင်ကိုသင်၏လက်ဖြင့်ကိုင်လျှင်တောင်မှဆံပင်မလှုပ်ပါကမြင်းနီကိုသင်၏ခေါင်းပေါ်သို့ရွှေ့ပါ။
နောက်ထပ်သဘာဝအရကြည့်လျှင်သေးငယ်သော၊ အတက်အပေါက်အနည်းငယ်ကို ponytail ထဲသို့ပြုလုပ်နိုင်သည်။ ဆံပင်၏အဆုံးကိုပျော့ပြောင်းစေပြီးဖြတ်တောက်မှုသည်တဖြည်းဖြည်းလျော့နည်းသွားမည်။ ဒါဟာမတူညီတဲ့မတူကွဲပြားမှုများကိုစတိုင်လ်နှင့်ပေါင်းစပ်ထည့်သွင်းလိုက်ခြင်းကြောင့်ရင့်ကျက်သောပုံပန်းသဏ္giveာန်တစ်ခုကိုပေးလိမ့်မည်။
နည်းလမ်း ၅ - ရှေ့ Ponytail ဆံပင်ညှပ်
၁။ သန့်ရှင်း၊ ချောမွေ့ခြောက်သွေ့သောဆံပင်ကိုပြင်ဆင်ပါ
သင်၏ဆံပင်သည်ခြောက်သွေ့။ သန့်ရှင်းပြီးချောမွေ့ကြောင်းသေချာစေပါ။ အထူးသဖြင့် frizzy ဆံပင်ရှိရင်ဒီဟာကိုသင်မဖြတ်ခင်လုပ်ဖို့အရေးကြီးတယ်။ ဒါကခြောက်သွေ့တဲ့ဆံပင်ဖြစ်ပြီးဒါကြောင့်ညစ်ပတ်ပြီးအဆီပြန်တဲ့အချိန်အထိသင့်ရဲ့ဆံပင်ကိုလျှော်ဖို့မလိုပါဘူး။
၂။ ဆံပင်ကို Bend Over, Brush နှင့် Ponytail တစ်ခုဖန်တီးပါ
ဇောက်ထိုးခေါင်းကိုထောက်ထား။ ဆံပင်ကိုနဖူးရဲ့အလယ်ဗဟိုမှာရှိတဲ့ ponytail ထဲကိုထည့်ပါ။ သင်၏ ဦး ခေါင်းကိုဇောက်ထိုးဖြင့်သင်၏ဆံပင်ကိုရှေ့သို့ဆွဲ။ သင်၏နဖူး၏အလယ်ဗဟိုတွင်သင်၏ဆံပင်ပုံစံပေါ်တွင်စတင်သည်။
သင်၏ပထမဆံပင်ပုံစံဘယ်လောက်ကြာကြာနေရမည်ကိုစဉ်းစားပါ။ သင်သည်သင်၏မျက်ခုံးများအဆုံးသတ်မည့်မြိတ်များနှင့်သင်၏မေးစေ့၌စတင်သောအလွှာများကိုသွားလိုပါသလား။ သင်၏ ponytail သင်၏နဖူးပေါ်တွင်သင်၏ပထမဆုံးဆံပင်လဲရန်လိုအပ်သည့်နေရာနှင့်အကွာအဝေးကိုတိုင်းတာပါ။
၄။ သင်၏ Ponytail အားလက်တစ်ဖက်ဖြင့်ခိုင်မြဲစွာကိုင်ထားပြီးအခြားတစ်ခုနှင့်ဖြတ်ပါ
သင်၏ ponytail ကိုလက်တစ်ဖက်ဖြင့်ကိုင်ထားပါကအခြားတစ်ခုနှင့်လည်းဖြတ်ပါ။ သင်ဖြီးနှင့်အတူတိုင်းတာသောအရှည်မှာကတ်ကြေးကိုယူပြီး ponytail ကိုညှပ်လိုက်ပါ။
အုန်းလက်၏အဆုံးသို့နှင်တံ။ ယခုသင်၏ကတ်ကြေးများပေါ်တွင်ဆုပ်ကိုင်ထားပါ။ ဆံပင်ပေါ်သို့တိုက်ရိုက်ညွှန်ပြပါ။ ရိတ်သောအလားနှင့်တူသည်မဟုတ်လျှင်အားလုံးသည်ဘိလပ်မြေနှင့်ချည်မျှင်များဖြစ်သည်။
သင်သည်ကတ်ကြေးများကိုမျက်လုံးများနှင့်ထိ မိ၍ သို့မဟုတ်မျက်လုံးထဲသို့ကျသည့်ဆံပင်များမကျမိစေရန်ကတည်းကရှေ့သို့လှဲနေစဉ်ဂရုစိုက်သင့်သည်။
၆။ Elastic Band ကိုဆွဲယူပြီးအကဲဖြတ်ပါ
ဆံပင် elastic ချွတ်အဖြစ်သင့်ရဲ့ဆံပင်အရပျသို့ကျသွားဒါကြောင့်သင်၏ ဦး ခေါင်းကိုခါ။ အရှည်နှင့်စတိုင်ကိုအကဲဖြတ်ရန်သင်၏အချိန်ကိုယူပါ၊ ပြီးနောက်ပြီးပါကထိလိုသည့်အရာတစ်ခုကိုသင်လိုလားသည်ကိုဆုံးဖြတ်ပါ။
နည်းလမ်း ၆။ သင်၏ Pigtails ဖြတ်တောက်ခြင်း
သင်၏ဆံပင်ကိုအလယ်၌ခွဲပါ။ ဆံပင်ကိုအံဝင်ခွင်ကျဖြစ်စေခြင်းဖြင့်သင်၏ဆံပင်ကိုညီမျှသောအပိုင်းနှစ်ပိုင်းခွဲပါ။ သင်၏ ဦး ခေါင်း၏အလယ်ပိုင်းရှိမျဉ်းဖြောင့်ဖြောင့်ဖြောင့်အောင်သေချာစေရန်မှန်ဖြင့်သုံးပါ။
3. သင့်ဆံပင်နှင့်အတူအနိမ့် Pigtails လုပ်ပါ
သင့်ရဲ့ဆံပင်ကိုအနိမ့်ကျသောနေရာများတွင်ထားပါ။ သင်၏ဆံပင်၏ထက်ဝက်ကို (pigtails ဟုခေါ်သည်) သီးခြား ponytails (၂) ခုခွဲထားပါ။ သင့်ဆံပင်သည်သင်၏ ဦး ခေါင်းနှစ်ဖက်ရှိသင်၏လည်ပင်းနှင့်ဆုံသည့်နေရာနှင့်နီးကပ်စွာဖြစ်သောသင်၏နားများနောက်ကွယ်မှ / အောက်နားတွင်သင့်ခေါင်းပေါ်တွင်ထိုင်ရန်သေချာအောင်လုပ်ပါ။
4. သင့်ရဲ့ Pigtails တင်းကျပ်
Pailtail တင်းကျပ်ရန်အတွက်လက်သည်းတစ်ခြမ်းတွင်လက်မတစ်ဝက်စီရှိစေရန်ဆံပင်ကို ponytail ကိုင်ဆောင်ထားသူလက်အောက်အနည်းငယ်တွင်ထားပါ။ ထို့နောက်တဝက်ခွဲနှစ်ခုကိုညင်သာစွာဆွဲယူပါ။ သို့မှသာ elastic band သည်သင့် ဦး ခေါင်း၏အောက်ခြေနှင့်အထက်သို့ရွေ့လျားနိုင်သည်။
သင့်ရဲ့ Pigtails ပတ်ပတ်လည် elastic Band ဆွဲထုတ်
သင်၏ pigtails န်းကျင် elastic ကြိုးဆွဲအားအညီအမျှ / ဖြည်းဖြည်းချပါ။ သင်လိုချင်သောအရှည်ရရှိသောအခါ STOP ။ အဆိုပါပင်ဖြစ်ကြောင်းသေချာပါစေ။
၆။ Elastic ကြိုးအောက်ရှိဆံပင်ကိုညှပ်ပါ
elastic band အောက်ရှိဆံပင်ကိုညှပ်ပါ။ နှစ်ဖက်စလုံးအတွက်လုပ်ပါ။ မင်းဆံပင်ကိုဖြတ်ပြီးဖြတ်လိုက်မယ်၊ နောက်ထပ်သဘာဝအတိုင်းကြည့်နိုင်ရန်အတွက်ကတ်ကြေးများကို ၄၅ ဒီဂရီထောင့် ရှိ၍ ဆံပင်ကိုအပေါ်သို့မြှင့်ထားပါ။
၇။ Elastic Bands များကိုဖယ်ရှားပါ။
ဧလိminaအဆိုပါ ponytail ကိုင်ဆောင်သူ te ။ သငျသညျ pigtail တိုင်းဖြတ်ကြပြီးတာနဲ့သင့်ဆံပင်နောက်ကျောမှာအမှတ်လာကြောင်းသတိပြုမိပါလိမ့်မယ်။
ဆံပင်၏နောက်ဖက်ရှိ V-shape ကိုလိုချင်ပါက၊ နောက်အဆင့်သို့သွားပါ။ သင်ဒါကိုမကြိုက်ဘူးဆိုရင်သင် eli လုပ်နိုင်ပါတယ်minaသင်၏ဆံပင်ကိုသင်၏လည်ပင်း၏လည်ပင်းပေါ်ရှိ ponytail တစ်ခုတည်းသို့ချည်ခြင်းအပြင်အချက်ကိုဖြတ်တောက်ခြင်းဖြင့်အချက်ကိုဖော်ပြပါ။
သင်၏ဖြတ်ပိုင်းပိုလန် သင်၏အနားစွန်းများကိုဖြတ်ပြီးဆံပင်အပိုင်းအစများကိုဖြတ်တောက်ပါ၊ အစွန်အဖျားသို့ဖြတ်တောက်သည့်အခါအဆုံးသို့ဖြတ်တောက်သည့်အခါကတ်ကြေးများကို ၄၅ ဒီဂရီထောင့်ဖြင့်ဆံပင်နှင့်ကပ်ပါ
နည်းလမ်း ၇။ သင်၏ဆံပင်ရှည်ကိုဇောက်ထိုးလျှော့ချပါ
သင်၏ဆံပင်ကိုဆေးကြောပါ။ သင်၏ဆံပင်ကိုလေမှုတ်ရန်မလိုပါ၊ ဤဆံပင်အတွက်အနည်းငယ်စိုစွတ်စေလိုသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
၂။ ကြမ်းပြင်ပေါ်မှာတစ် ဦး ကမျက်နှာသုတ်ပုဝါကိုပြင်ဆင်ပါ
3. Overand Lean နှင့်သင့်ဆံပင်ကိုအောက်သို့ချပါ
သေးငယ်သောအပိုင်းများကို ဖြတ်၍ ဘယ်ဘက်သို့ရွေ့လျားပါ။ သင့်ရဲ့ ဦး ခေါင်းကိုရွှေ့ဖို့ဘယ်တော့မှသတိထားဖြစ်ခြင်း, ကြမ်းပြင်နှင့်အပြိုင်ဖြတ်။ အပိုင်းအနည်းငယ်စီပြီးတဲ့နောက်သင်ဆံပင်ကိုဖြတ်ပြီးသင်တတ်နိုင်သမျှအနိမ့်ဆုံးဆုံးဖြတ်ပေးပါ။
သင်ကြိုက်သည်ထက် နည်း၍ ချွတ်ပါ၊ သွေ့ခြောက်သောအခါသင်၏ဆံပင်အနည်းငယ်တိုသွားလိမ့်မည်။ သငျသညျပို။ ဆံပင်ချွတ်နိုင်သည်ကိုသတိရပါ; နှေးကွေးစွာသွားနှင့်သင်၏ဖြတ်တောက်မှုအတွက်ရှေးရိုးစွဲဖြစ်လိမ့်မည်။
၅။ ဖြောင့်မတ်မတ်တပ်ရပ်၊ ပြန်လည်ဆန်းစစ်။ အကဲဖြတ်ပါ
နည်းလမ်း ၈။ ရှည်သောဆံပင်ကိုရှေ့သို့ဖြတ်ခြင်း
၁။ သန့်ရှင်း။ စိုစွတ်သောဆံပင်ကိုပြင်ဆင်ပါ
သင်ကိုယ်တိုင်မြင်နိုင်ရန် Mirror ရှေ့မှာရပ်ပါ
သင်၏ဆံပင်ကိုလိုအပ်သောအစိတ်အပိုင်းများတလျှောက်ဖြည့်ပါ။ သင် ဦး ခေါင်းကိုကြားနေအနေအထားဖြင့်ထိန်းထားစဉ်ထိုသို့ပြုလုပ်ပါ။ ဝေးလွန်း။ ရှေ့သို့မလှည့်ဘဲဘက်တစ်ဖက်သို့မလှည့်ပါနှင့်။
သင်၏ဆံပင်ကိုအပိုင်း ၈ ပိုင်းခွဲပါ။
သင့်လည်ပင်း၏ nape မှာအပိုင်းတစ်ခု။
ဆံပင်တွေအကုန်လုံးကိုလက်ချောင်းတွေပတ်ပတ်လည်ကိုလှည့်ပတ်ပြီးမညှပ်မီ၎င်းကိုမဖယ်ရှားခင်။ ဒီအပိုင်းကိုလည်ပင်းရဲ့လည်ပင်းမှာချန်ထားပါ။ နောက်မှရှေ့ကနေဆံပင်တွေကိုဖြတ်တောက်တာကရှေ့နောက်ကျောထက်လွယ်ကူလို့ခင်ဗျားတို့စတင်နိုင်မယ့်အပိုင်းပါ။
ဆံပင်တွေထူနေရင်ဆံပင်တွေကိုပိုများတဲ့အပိုင်းတွေခွဲထားသင့်တယ်။ အထူးသဖြင့်သင့် ဦး ခေါင်းထိပ်နဲ့အပေါ်ဖက်၊ လည်ပင်းရဲ့ nape မှာ။
သင်လိုချင်သောဆံပင်ညှပ်အမျိုးအစားပေါ် မူတည်၍ ကတ်ကြေးကိုအခြားသောနည်းလမ်းဖြင့်ကိုင်ထားသင့်သည်။
အကယ်၍ တုံးတဖြောင့်ဖြတ်ဖြတ်ရန်လိုအပ်ပါကဆံပင်ကို ဖြတ်၍ ဖြတ်တောက်သည့်အခါသင်သည်ကတ်ကြေးများကိုအလျားလိုက်ကိုင်ထားသင့်သည်။
ပျော့ပျောင်းသောသဘာဝနှင့်အလွှာပုံစံတို့လိုအပ်ပါကသင်သည်ကတ်ကြေးများကို ၄၅ ဒီဂရီထောင့်ဖြင့်လှည့ ်၍ ဆံပင်ကိုအထက်သို့ဖြတ်တောက်ကာသေးငယ်သောဖြတ်တောက်မှုကိုပြုလုပ်သင့်သည်။
(Bangs ကဲ့သို့) ပို၍ ပညာရှိသောအစွန်းအတွက်ဆံပင်ကိုလိုအပ်သောအရှည်သို့ ဦး စွာဖြတ်လိုက်ပါ၊ ထို့နောက်ကတ်ကြေးဖြင့်ဒေါင်လိုက်ထောင့်ကိုပြုလုပ်ပါ၊ ဤအရာကိုဆံပင်တစ်ပိုင်းလျှင်ဤအရာများကိုသာပြုလုပ်ပါ။ သို့မဟုတ်ပါက၎င်းသည်ပညာရှိသကဲ့သို့ကျဲပါးသွားလိမ့်မည်။
လည်ပင်း၏ nape မှာဆံပင်အပိုင်းဖြတ်တောက်ပါ။ သင်၏ဆံပင်ကိုပခုံးပေါ်သို့တင်ပါ။ ဖြီးဆံပင်ထွက်အပိုင်း။ သင်၏လက်ညှိုးနှင့်အလယ်လက်ချောင်းများအကြားတွင်၎င်းတို့ကိုမြဲမြံစွာဆုပ်ကိုင်ထားပြီးဆံပင်အပိုင်းကိုထပ်မံဖြီးပါ။
ကျန်ဆံပင်ကိုဖြတ်တောက်ပါ။ သင်သည်လည်ပင်း၏လည်ပင်းပေါ်ရှိအပိုင်းနှင့်ရောင့်ရဲသည်နှင့်တပြိုင်နက်သင်၏ဆံပင်၏ထိပ်ပိုင်းညာဘက်ခြမ်းကိုဖြုတ်။ ဖြတ်လိုက်ပါ။
ထို့နောက်သင်၏ဆံပင်၏ထိပ်ပိုင်းဘယ်ဘက်ခြမ်းကိုချန်ထားပါ၊ ထို့နောက်၎င်းသည်ထိပ်ပိုင်းကျောဘက်နှင့် nape ကဏ္withများအထိပင်ဖြစ်အောင်ဖြတ်ပါ။
အကယ်၍ သင်၏အခန်းကဏ္ begin များစတင်ခြောက်သွေ့လာပါကဖြီး။ မဖြတ်ခင်ရေဖြန်းပေးပါ။
သင်၏ဆံပင်အားလုံးကိုတ ဦး တည်းအရင့်ဆုံးဖြတ်ပြီးပြီးနောက်သင်သည်အလွှာများကိုထည့်နိုင်သည်။ သဘာဝရှုခင်းတစ်ခုအနေဖြင့်သင်သည်ဆံပင်အပိုင်းအစငယ်များကိုကျပန်းလုပ်သင့်သည်။
သင်၏ဆံပင်ကိုခေါင်းလျှော်ရည်ဖြင့်ဆေးပြီးအခြောက်ခံပါ။ အခြေအနေနှင့်ဆံပင်သုတ်ခြင်း။ ထို့နောက်သင်၏ဆံပင်ကိုလေမှုတ်စက်သို့မဟုတ်မျက်နှာသုတ်ပုဝါ။
တစ်ခုခုရှိလျှင်မညီမညာဖြစ်နေသော bits များကိုသန့်ရှင်းပါ။ ဆံပင်များခြောက်သွေ့ပြီးသည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက်အရာအားလုံးညီမျှမှုရှိစေရန်နှင့်မည်သည့်အလွှာများကောင်းမွန်စွာရောနှောနေရမည်ကိုသေချာစေရန်သူတို့ကိုထပ်မံကြည့်ရှုပါ။
မေးခွန်းဖြေ - ဆံပင်ကိုငါဘက်မှာခွဲထားတယ်၊ ဒီနည်းလမ်းတွေအကြံပြုထားတဲ့အတိုင်းဆံပင်တွေကိုအလယ်မှာရှိနေ ဦး မလား။ ငါကဘေးဘက်မှာ ၀ တ်ဆင်တဲ့အခါငါ့ဆံပင်မညီမညာဖြစ်နေမလား။
အဖွေဖြေ - သင်စမ်းကြည့်နိုင်တယ်၊ ဆံပင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအကောင်းဆုံးအရာကသူတို့နဲ့အတူစမ်းသပ်မှုလုပ်နိုင်တယ်။ ၎င်းသည်အလုပ်မလုပ်ပါကသင်အမြဲပြောင်းလဲနိုင်သည်။
မေးခွန်းဖြေ - ဆံပင်တွေကိုဖြောင့်ဖြောင့်ချင်တယ်၊ ဒါပေမယ့်ဖြတ်လိုက်ရင်အလုပ်မလုပ်ဘူး။ ငါဘာလုပ်သင့်လဲ?
အဖွေဖြေ။ ။ ဆံပင်ကိုဖြောင့်ဖြောင့်အောင်ကြိုးစားပြီးဆံပင်ဖြူတွေတင်ပါ။ ဒါကိုနေ့စဉ်လုပ်ပါ ဒါကအထောက်အကူပြုမယ်ဆိုရင်ဆံပင်အလှပြင်ဆိုင်သမားတစ်ယောက်ဆီကနေမေးပါ။
မေးခွန်းဖြေ - ငါ့ဆံပင်တွေကပခုံးအရှည်ပဲ။ သူတို့ကိုငါတိုပြီးအလွှာလိုချင်တယ် ကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်မည်သို့ပြုလုပ်နိုင်သနည်း။
အဖွေဖြေ - သင်၏ဆံပင်ကိုလက်ရှိအရှည်ထက်ပိုတိုစေလိုလျှင်သင်၏လက်ချောင်းများကို သုံး၍ သင်၏ဆံပင်ကိုအပိုင်းများနှင့်လက်မများဖြင့်ဖြတ်တောက်နိုင်သည်။ သို့သော်သင်၏လက်ရှိဆံပင်ပုံစံရှိအမျိုးသမီးများသည်အလွှာများထားရန်အခက်တွေ့နိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်သင်ကနည်းနည်းသောအလွှာကို တင်၍ ပုံစံတစ်မျိုးဖြင့်ကြည့်ရန်သင့်ဆံပင်ပုံသဏ္canာန်ဖြစ်သောကြောင့် bob ဖြတ်ခြင်းကိုသွားရန်ကောင်းသောရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်။
မေးခွန်းဖြေ - ခါးအရှည်ဆံပင်ကိုပခုံးပေါ်ခုတ်လိုက်တာလား။
အဖွေ- သင်ဆံပင်ဖြတ်တဲ့နေရာမှာရော်ဘာကြိုးနဲ့ချည်ထားပါ။ ဆံပင်ကိုဖြောင့်တန်းတန်းဖြတ်ပါ။ ဒါဟာအညီအမျှဖြတ်လိမ့်မယ်
မေးခွန်းဖြေ - အကြီးအကျယ် V-cut အတွက်ဘယ်နည်းလမ်းကိုငါလိုက်နာရမလဲ။
အဖွေ: အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့် ponytail နည်းလမ်းကိုသုံးပါ။ သို့သော်အလျားလိုက်မဖြတ်ပါနှင့်။ V. ကိုအထက်သို့မျက်နှာမူပါ။
မေးခွန်းဖြေ - ငါ့ဆံပင်တွေကသဘာဝအတိုင်းကောက်ကွေးနေတယ်။ သူတို့ကရှည်တယ်၊ ငါသူတို့ကို shag style နဲ့ဖြတ်ချင်တယ်။ ငါ့ဆံပင်အတွက်ဒါကောင်းသလား။
အဖွေ- အကယ်၍ သင်၏ဆံပင်သည်ခြောက်သွေ့။ frizzy လျှင်အလုပ်မလုပ်ပါ။ အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုတစ်ခုမှာ၎င်းတို့ကိုအလွှာချရန်ဖြစ်သည်။ သို့မှသာ၎င်းတို့သည် ပို၍ များသောအသံပမာဏနှင့်အတူထူထဲလာလိမ့်မည်။ သင်၏ဆံပင်များကဲ့သို့စတိုင်တစ်ခုအနေဖြင့်သင်သည်၎င်းတို့ကိုပခုံးအရှည်ပိုမိုတိုစေသင့်သည်။